တောင်ငူမြို့တွင် (၈၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများ ဒေသစာရီလှည့်လည် ပူဇော်ပွဲနှင့် ?? - Yangon Media Group
တောင်ငူမြို့တွင် (၈၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများ ဒေသစာရီလှည့်လည် ပူဇော်ပွဲနှင့် ??
တောင်ငူ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂
တောင်ငူ ကေတုမတီမြို့တည်နန်းတည် ၅ဝ၈ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ကြီးကို နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ခွဲက စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒေသခံများ နှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လူအင်အားသိန်းချီ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဒေသခံများထံက စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ”ပွဲတော်ကို ၂ဝ၁၇ က တစ်ကြိမ် မကျင်းပခဲ့တာကလွဲရင် နှစ်ငါးရာပြည့်ကတည်းက ကျင်းပနိုင်တာပါ။ ဒီကနေ့လည်း ဝင်းခင်းသဘင်ပွဲတော်က လူအင်အားများစွာ အသုံးပြုထားသလို မင်းသား မင်းသမီးတွေနဲ့ဆိုတော့ ဒေသခံ တွေသာမက အနယ်နယ်အရပ် ရပ်က ပွဲကြည့်ပရိသတ် သိန်းချီ တယ်”ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြော ကြားသည်။
အဆိုပါ တောင်ငူ ကေတုမတီ မြို့တည်နန်းတည် ၅ဝ၈ နှစ်ပြည့် ပွဲတော်ကို (၈၇)ကြိမ်မြောက် နှစ် ကျိပ်ရှစ်ဆူပွဲတော်နှင့်အတူ ကျင်းပ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အားကစားပွဲ၊ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲများ၊ ကြည့်ချင်ပွဲများသာမက ဝင်းခင်း သဘင်ပွဲတော်နေ့တွင် ရုပ်ရှင်မင်း သား မင်းသမီးများ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ ကြသည်။
တောင်ငူ ကေတုမတီ မြို့ တည်နန်းတည် ၅ဝ၈ နှစ်ပြည့်ပွဲ တော်နှင့် (၈၇)ကြိမ်မြောက် တောင်ငူမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ နှစ် ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများလှည့်လည် ပူဇော်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက်မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ သုံးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပခဲ့ပြီး တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် နေ့တွင် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်များ က တောင်ငူမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များတွင် အလှပြမော်တော်ယာဉ်ကြီး များဖြင့် လှည့်လည်သီဆိုဖျော်ဖြေ ခဲ့ကြသည်။
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး စေတီတော် ပန်းလည်တိုင် စိုက်ထူပူဇော်ခြင်း မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနား နိုင်ငံတော
အမေရိကန် အခြေစိုက်စခန်းနှင့် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများမှာ အီရန်၏ ဒုံးကျည် ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အကွာအ??
ကိုဆွေဝင်းကို ရုံးချိန်းတွင် မစစ်ဆေးဖြစ်ဘဲ အောက်တိုဘာ ၃ဝ ရက်ကို ထပ်မံချိန်းဆို
နေတိုးနှင့် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့၏ ”နှစ်ပါးသွား Update}”ရုပ်ရှင် မကြာမီရုံတင်မည်
ရိုးရာကျားတို့ အားပြိုင်ပွဲ-၅ ကို SKY NET အခမဲ့ ရုပ်သံလိုင်း တစ်လိုင်းတွင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်??
ပဲရစ်မြို့တွင် စိန်းမြစ်ရေတိုး၍ လူ ၁၅ဝဝ ကို ကယ်တင်လိုက်ရ
‘ပြုံးရွှင်ရေ.. ပျော်ရဲ့လား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မကြာမီ ရုံတင်မည်
တောင်ပြုန်း ပွဲတော်သို့ လည်ပတ်ကြမည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များ သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန် မန??